Maitiro Ekuita Izvo Zvizhinji zveNew AdWords Shanduko Yekushambadzira | Martech Zone
Google Ads Rubatsiro
Ndeupi waungade iwe: Iyo yekutarisisa-inobata dhijitari kushambadzira iyo inokwezva chiuru webhusaiti kushanya? Kana iyo inononoka-kuita iyo inogamuchirwa chete gumi nemaviri kudzvanya kusvika parizvino?
Mubvunzo unonyengera. Mhinduro haina.
Zvirinani, kwete kusvikira iwe waziva kuti vangani vevashanyi vatendeuka.
Chirevo chakanangwa zvakanyanya chinokonzeresa kuita gumi nemaviri maitiro ekushandurwa anokwanisa kuve akakosha kakapetwa kagumi pane iyo inokwezva mazana evashanyi vasina kukodzera vasingashanduki. Munyika umo kubaya kwese kunodhura mari, shanduko dzakakosha. Mushure mezvose, ndeipi pfungwa yekubhadhara kushambadzira kana ikasakonzera traffic inokwanisa iyo inogona kuunza imwe mari mukudzoka?
Ndiko kufunga shure kweshanduro yazvino yeGoogle kuenda kuAdWords dhonza-uye-kudonhedza mushumo. Nyowani kutendeuka kwekutevera makoramu ipa vashambadziri mamwe masimba pamusoro pekuti data rinoratidzwa sei kuti iwe uone izvo zviri kunyatso kushanda.
Chii chiri kuchinja neAdWords Shanduko Yekushuma?
A itsva Kutendeuka column iri kutsiva Shanduko yekugadzirisa. Iyi nyowani nyowani inoratidza data yezvese zviito zvekushandurwa ine optimization yekumisikidza yakaiswa ku "on."
Zvichakadaro, iyo Shanduko Dzese column iri kutsiva Zvinofungidzirwa zvachose. Iyi ikholamu inoratidza data ye zvose shanduko - kunyangwe watendeuka kugadzirisa on or kure.
Zvinorevei kune AdWords Shanduro Yekushandura Shanduro kwauri?
Kana iwe ukaona kusimuka kukuru mukutendeuka kwako kweAdWords, usavhunduke. Iwe pamwe unongoda kuita mashoma ekugadzirisa kuitira kuti yako mishumo ifanane neshanduko yeGoogle inoshanduka ye kutendeuka. Izvi zvinopedzisira zvaita kuti zvive nyore kutarisisa pakutendeuka kukuru kunoita bhizinesi rako mari.
Iko kushandurwa kwekuzivisa kushandurwa kunoitika otomatiki, asi pane matanho mashoma aunofanirwa kutora kuti uone kuti data rako raunzwa nenzira yakatsetseka uye isina musono:
Chinja marongero ako ekushandurwa kwemacro uye micro
Kana iwe usati watove, sarudza chaizvo izvo zvinoverengeka se macro kutendeuka kwebhizinesi rako. Izvi zvinowanzo kuve nekukanganisa kwakananga pamari yekambani yako uye zvinosanganisira kutenga chaiko kana chinangwa chekutenga. Kunyoreswa kwakabhadharwa, yemahara kuyedza kusaina uye kukumbira kwedemo kunogona kuverengera sekushandurwa kwemacro.
Kuona kuti idzi shanduko dzinounza mari dzinoratidza mune chaidzo Kutendeuka column, tarisa yega yega kuti ive nechokwadi chekuti yakagadzirirwa kuti igadziriswe: Sarudza iyo shanduko iwe yaunoda kugadzirisa, wobva wadzvanya Rongedza masethingi> Optimization uye uve nechokwadi chekuti yakamisikidzwa. on.
Saizvozvowo, iwe unofanirwa kudzora iyo optimization kuisa kune chero micro shanduko - senge kusainira tsamba yemagetsi kana kukutevera pasocial media. Shanduko idzi dzicharamba dzichitaurwa, pamwe nedzose macro shanduko, mu Shanduko Dzese column.
Kana iwe wakachengetedza Filters izvo zvinongedzo kana kushandisa shanduko kuita kuverenga, tarisa kuti uone kuti izvi zvichiri kushanda nemazvo. Semuenzaniso: Kana iwe waisa imwe diki shanduko ku kure, ungangoda kushandura mafirita kuti ushandise iyo nyowani "Shanduko" ikholamu saka hapana chekukanganisa pakuzivisa.
Gadziridza otomatiki mitemo.
Kana ukashandisa zvoga mitemo or tsika makoramu kuteedzera kushandurwa, kuongorora uye kugadzirisa ako marongero kuti uve nechokwadi chekuti vanoramba vachishanda sekutarisirwa. Zvekare, iwe uchazoda kushandisa iyo nyowani Kutendeuka column yekuona kuti iyi mitemo inoramba ichikuudza iwe kana kushambadzira kuri kukanganisa bhizinesi rako repazasi. Kana iwe ukashandisa scripts kugadzirisa mashandiro enguva dzose, iwe uchazoda kutarisa kodhi uye uone chero chinhu chinonzi a kupinduka inogadziridzwa kuratidza shanduko.
Kupfupisa: Google yazvino shanduko kuAdWords kuzivisa ichaita kuti zvive nyore kuteedzera iyo data inonyanya kukoshesa kune rako bhizinesi. Zvese zvaunoda kuti uite kutora matanho mashoma anokurumidza kuti uve nechokwadi chekuti makoramu, mafirita nemitemo zvakagadziriswa kuti zvinyatso kuratidza shanduko.
Tags: adwords automated mitemoadwords shandukoadwords mafiritagoogle adwords
Nov 5, 2015 pa6: 45AM
Ndatenda nekuvandudza Amanda. Zvakawanda zvichawana izvi zvichibatsira. Imwe nzira yekuenderana neshanduko muGoogle Adwords uye mamwe mawebhu analytic mapuratifomu kutsvaga adtech chishandiso chinogona kuvabatanidza uye http://www.TapAnalytics.com unogona kuita izvozvo chete.